Etu ị ga - esi ahọrọ ọkọlọtọ mgbakwunye gị maka saịtị gị Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
by Beverly Obere on Nwere ike 16, 2021
Olee otú ịhọrọ Mgbakwunye ọkọlọtọ Maka saịtị gị
web Mgbakwunye ahịa bụ ụkpụrụ dị ugbu a, agbanyeghị web Mgbakwunye ahịa emeela ka ọ dị mma maka ndị nwe ụlọ ọrụ dị iche iche bụ ndị nyeworo mgbakwunye ahịa. web Mgbakwunye ahịa na-ebukarị echiche nke ahịa mmekọ asia ebipụtara na saịtị mmadụ, yana agbanyeghị na enwere ụzọ ndị ọzọ eji eji azụmaahịa mgbakwunye, nke a nwere ike bụrụ ihe kachasịkarị.
Ọ bụrụ na ị na-achọ Mgbakwunye ahịa asia ịkwado na saịtị gị, ọ dị mkpa na ị gbalịrị ịhọrọ ahịa mmekọ mgbakwunye asia. Ọtụtụ ndị nwe ụlọ ọrụ ndị jikọtara ịntanetị njikọta n'ezie achọpụtala na ahịa ederede mgbakwunye ederede a asia enweghị ihe ọ bụla pere mpe karịa pịa ahịa mgbakwunye mgbakwunye ndị ọzọ asia. Ngwaahịa Mgbakwunye ndị a nwere ike ụfọdụ na - ebute ihe ndị ọzọ sitere na ahịa mmekọ gị lekwasịrị na-ege ntị, ndị a Mgbakwunye ahịa ngwá ọrụ ndị N'otu aka ahụ kama mgbakasị.
GỤRỤ AHỤ Dị iche iche nke Mgbakwunye Mgbakwunye
Ọ bụrụ na enwere mgbasa ozi eserese nke ị na-ahọrọ iji dị ka akụkụ nke usoro azụmaahịa mmekọ na saịtị gị, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịgbalị ijide n'aka na mgbasa ozi mgbakwunye na-ekwekọ n'ụdị agba na echiche nke gị website dị ka o kwere mee. Nke a ga - enyere aka mgbakwunye mgbasa ozi mgbakwunye na itinye aka na saịtị gị. Mgbakwunye ahịa asia na ntinye ederede njikọta ahia bara uru maka ndị na-eche echiche banyere azụmaahịa mmekọ.
Ọtụtụ ndị nwe ụlọ ọrụ ejirila ọrụ mgbakwunye ịntanetị achọpụtala n'ezie na ederede mgbakwunye mgbakwunye ndị a asia enweghị ihe ọ bụla pere mpe karịa pịa ahịa mgbakwunye mgbakwunye ndị ọzọ asia. Ọ bụrụ na enwere mgbasa ozi eserese nke ị na-ahọrọ iji dị ka akụkụ nke usoro azụmaahịa mmekọ na saịtị gị, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịgbalị ijide n'aka na mgbasa ozi mgbasa ozi dabara na ụdị agba na echiche nke gị website dị ka o kwere mee. Mgbakwunye ahịa asia na njikọ njikọta azụmaahịa bara uru bara uru maka ndị nwere mmasị na mgbakwunye mmekọ.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Mgbakwunye Mmemme Mmemme, Pụrụ Iche Resources